Iimfundiso zePriptized Baptist and Practic Practices
Iimfundiso eziPhambili zeBaptist Baptist
AbaBaptisti abaPhezulu babhala zonke iinkolelo zabo ngqo kwi-1611 ye- King James Version yeBhayibhile. Ukuba abanakukuxhasa ngeSibhalo, abayilandelanga. Iinkonzo zabo zihlanjululwa kwicawa yaseTestamente eNtsha ngokushumayela, ukuthandaza, nokucula ngaphandle kokuhambelana neengoma.
Iinkolelo zeBaptist Baptist
Ubhaptizo - Ubhaptizo yindlela yokuqulunqa ebandleni, ngokweSibhalo.
Abadala beBaptisti baqala ukubhaptizwa baze baphinde babhaptize umntu obhaptizwe enye inkolo. Ubhaptizo lwabantwana aluqhutyelwa.
IBhayibhile - IBhayibhile iphefumlelwe nguThixo kwaye yimbuso wodwa kunye negunya lokholo kunye nokusebenza kwicawa. I-King James Version yeBhayibhile yimiqulu yedwa yedwa eyaziwayo kwiicawa zasePrimbithe Baptist.
Ingqungquthela - Izibhengezo ziqhelanisa ukuxolelana , kuphela ngamalungu abhaptiziweyo "njengokholo kunye nokusebenza."
Izulu, isihogo - Izulu kunye nesihogo zikhona njengeendawo zangempela, kodwa izibhengezo azifane zisebenzise loo migaqo kwingxelo yabo yeenkolelo. Abo bangabo phakathi kwabakhethiweyo abanalo ukuthambekela kwabo bonke kuThixo nakwizulu. Abakhethiweyo bahlelwe ngaphambili ngomhlatshelo kaKristu kubo esiphambanweni kwaye bahlala bekhuselekile ngonaphakade.
UYesu Kristu - uYesu Kristu unguNyana kaThixo, uMesiya waprofetha kwiTestamente Elidala. Wayelelwa nguMoya oyiNgcwele, owazalwa yintombi kaMariya , wabethelelwa esiphambanweni, wafa, wavuka kwabafileyo.
Ukufa kwakhe komhlatshelo kwahlawula ityala lesono sabakhethiweyo bakhe ngokupheleleyo.
Ukuhlawulelwa okuNcinci - Enye yezimfundiso ezibeka abaPhezulu ngaphandle kweCandelo lokuThutyala, okanye iNkululeko yoKhuphela. Bakholelwa ukuba iBhayibhile ithi uYesu wafa ukuze asindise abakhethiweyo bakhe kuphela, inani elithile labantu abangaze balahlekelwa. Akazange afele wonke umntu.
Ekubeni bonke abakhethiweyo bakhe basindiswa, "unguMsindisi ophumeleleyo ngokupheleleyo."
Ubulungiseleli - abaPhathiswa ngabesilisa kuphela kwaye babizwa ngokuba ngu "Mdala," esekelwe kwimbali yeBhayibhile. Abaya kwi-seminary kodwa baqeqeshelwa. Ezinye iicawa zokuqala zeBhaptizi zihlawula inkxaso okanye umvuzo; Nangona kunjalo, abadala abaninzi banamavolontiya angakhokhelwa.
Abathunywa bevangeli - iinkolelo zokuqala zeBhaptizi bathi abakhethiweyo baya kusindiswa nguKristu noKristu yedwa. Abathunywa bevangeli abanako "ukusindisa imiphefumlo." Umsebenzi woMsebenzi awukhankanyiweyo kwiZibhalo kwizipho zebandla kwi-Efese 4:11. Esinye sezizathu zokuba i-Primitives yahlukana namanye amaBaptisti yayingavumelani malunga neebhodi zamabhunga.
Umculo - Izixhobo zomculo asisetyenzisiwe kwiicawa zokuqala zamaBhabhathathathaka kuba azikhankanyi kwiZibhalo kwiNtsana yeTestamente. Abanye abaNcinci baya kwiiklasi ukuphucula ukudibanisa kwabo abane kwintando ye-cappella .
Imifanekiso kaYesu - IBhayibhile iyakwenqabela imifanekiso kaThixo. UKristu unguNyana kaThixo, unguThixo, nemifanekiso okanye imifanekiso yakhe imifanekiso. AbaPhambili abanemifanekiso kaYesu kwiicawa okanye kumakhaya abo.
Ukuqalwa kwangaphambili - UThixo ulungelelanise (ukhethwa) inani labakhethiweyo ukuba lihambelane nomfanekiso kaYesu. Kuphela abo bantu baya kugcinwa.
Usindiso - Abakhethiweyo bakaKristu kuphela baya kusindiswa.
Usindiso luphelele ngobabalo lukaThixo ; umsebenzi udlala akukho nxalenye. Abo bavakalisa umdla okanye inqwenela kuKristu bangamalungu abakhethiweyo, kuba akukho mntu oza kusindiswa ngokwabo. Abanqwenela bakholelwa ekukhuselweni ngonaphakade kwabakhethiweyo: emva kokugcinwa, bahlale begcinwa.
Isikolo seCawa - iSonto leSonto okanye umkhanyo ofanayo akukhankanyiweyo eBhayibhileni, ngoko i-Primitive Baptisti iyayinqabela. Akwahluli iinkonzo ngamacandelo eminyaka. Abantwana baqukwa kwiinkonzo zonqulo kunye nemisebenzi yabantu abadala. Abazali bafanele bafundise abantwana babo ekhaya. Ngaphezu koko, iBhayibhile ithi abesifazane bafanele bathululwe ebandleni (1 Korinte 14:34). NgeCawa zeZikolo zivame ukuphula umthetho.
Isishumi - Isishumi kwakungumsebenzi weTestamente endala kumaSirayeli kodwa akufunwa ngumkholi namhlanje.
UZiqu-zintathu - UThixo unguMnye, oqulethwe ngabantu abathathu: uYise, uNyana, noMoya oyiNgcwele .
UThixo ungcwele, unamandla onke, unolwazi kwaye akapheli.
Izenzo zoBaptisti zokuqala
Iingxowa - Izikhulu zikholelwa kwimimiselo emibini: ubhaptizo ngokucwiliswa kunye neSidlo seNkosi. Bobabini balandela imifanekiso yeTestamente eNtsha " Ubhaptizo Lwabakholwa " lwenziwa ngumdala ofanelekileyo webandla. IsiSidlo seNkosi siquka isonka esingenagwele kunye newayini, izinto ezisetyenziswe nguYesu kwisidlo sakhe sokugqibela kwiVangeli. Ukuhlamba iinyawo , ukubonisa ukuthobeka kunye nenkonzo, ngokuqhelekileyo kuyinxalenye yeSidlo seNkosi.
Inkonzo yoNqulo - Iinkonzo zonqulo zenziwa ngeCawa kwaye zifana nezo ziseTestamente Elisha . Abadala beBaptisti bamaBhaptizi bashumayela imizuzu engama-45 ukuya kwimizuzu engama-60, ngokungaqhelekanga. Abantu banokuthandaza. Yonke ingoma ayinakho ukuhambelana kwezinto, kwakhona, ngokulandela umzekelo wecawa yokuqala yamaKristu.
Ukuze ufunde okungakumbi malunga neenkolelo zePriptized Baptist, tyelela ukuba yiyiphi i-Primitive Baptis Believes.
(Imithombo: pbpage.org, oldschoolbaptist.com, pb.org, kunye ne-vestaviapbc.org)
U-Shaheed Singh uMartyrs of History of Sikh
Kutheni UThixo Unamagama amaninzi kangaka?
Indlela yokwenza ibhola leNtshukumo
Kuthetha ntoni "i-Persone"?
Ngaba Ufanele Uthenge Iwaranti Eyongezelelweyo Yakho Imoto?
Imbali ye-Asia American Civil Rights Movement
Indlela yokuhlaziya i-Old Surfboard
Iintsuku ezingama-50 zePasika